Erdogan: Qudus waa "in ay noqoto caasimadda Falastiin" - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka TR
Image caption Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shirka ururka ay ku mideysan yihiin dalalka IMuslimiinta
Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa hoggaamiyayaasha dalalka Muslimiinta ku baraarujiyay in Qudus ay u aqoonsadaan in ay tahay "caasimadda xoogga lagu haysto ee Falastiin"
Hadal kuu ka jeediyay kullanka Ururka Iskaashiga Islaamka ayuu ku sheegay in go'aanka Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil in uu yahay "waxba kama jiraan".
Erdogan ayaa markale Israa'iil ku dilmaamay "dalka argagixisada".
Hoggaamiyaha Falastiiniyiinta, Maxamud Cabbas ayaa sheegay in "Mareykanka uu iska dhigay dal aan u qalmin in uu door ku yeesho geedi socodka nabadda".
"Ma ahan in aan aqbalno in Mareykanka uu door ku yeesho geedi socodka nabadda. Waxay caddeeyeen in ay si buuxda ugu xaglinayaan dhanka Israa'iil," ayuu ka sheegay shirka.
Magaalada Qudus waxay xuddun u tahay dagaalka ka dhex taagan Falastiin iyo Israa'iil.
Magaalada waxaa ku yaalla goobo barakeysan oo ay aaminsan yihiin Muslimiinta, Masiixiyiinta iyo Yahuudda.
Israa'iil ayaa hadda maamusho dhammaan Qudus, horey waxaa u maamuli jirtay Urdun. Yahuudda ayaa qabsaday magaalada intii uu socday dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967-dii, waxayna u araktaa in ay tahay caasimaddeeda aan la kala qeybin karin.
Caalamka weli muusan aqoonsanin in Israa'iil ay u madaxbannaan tahay Qudus, dalalka oo dhanna waxay safaaradohooda ku yaallaan magaalada Tel Aviv.
Si kastaba, madaxweyne Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanka uu safaaraddiisa u rari doono magaalada Qudus.
Arrinta xaqiiqada ah waxay tahay in Falastiiniyiinta iyo hoggaamiyayaasha Carabta uu la yaab ku noqday go'aanka Trump, kaas oo aan qeyb ka ahayn istiraatiijiyadda Bariga Dhexe.
Balse waxaa aad u cad in uu diiradda saarayo fulinta wixii uu Israa'iil u ballanqaaday xilligii ololaha siyaasadda uu ku jiray markii uu codka ka raadsanayay Yahuudda Mareykanka deggan iyo masiixiyiinta diintooda ku adag.
Saraakiisha waxay sheegeen in madaxweynaha uu aqbalay in uu saxiixo qorshaha dib loogu dhigayo raridda safaaradda, balse wuxuu aqoonsaday in Qudus ay caasimad u tahay Israa'iil iyo in la billaabo hannaanka lagu rarayo safaaradda.
"Iyadoo madaxweynayaashii hore ay ololaha ku ballanqaadeen arrintan," ayuu yiri Mr Trump oo guul ku tilmaamay tallaabadiisa, "Way ku fashilmeen in ay fuleen. Maanta, aniga ayaa fulinaya", ballanqaadkaasi, ayuu yiri.
Madaxweyne ku xigeenka Mike Pence ayaa dhoola cadeynayay markii Trump uu ku dhawaaqayay go'aankan wax wayn ka bedelay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Pence waa nin si wayn galaangal ugu leh in Trump uu ku qanciyo in uu raaco wixii uu ololaha ku ballanqaaday, waana nin ay siyaasaddiisa ka muuqato sida uu ugu adag yahay diintiisa masiixiyadda iyo wuxuuna aaminsan yahay madaahibta Evangelicals, kuwaas oo taageera xushmeynta Israa'iil.
Taasi maysan dabamarin xildhibaan Falastiini ah oo masiixi ah, Hannan Ashrawi. "Allahey iima sheegin waxa uu isaga rabbigiisa u sheegay," ayey tiri xilli ay wareysi siineysay BBC-da.
"Anagaa ah masiixiyiinta saxda ah, waana inaga kuwa dhulka leh, anagaa boqollaal sano ku nooleyn dhulkan. Sidey ugu dhiiran karaan in ay ii yimaadaan oo iisheegaan bible-ka iyo waxa uu qabo!"
Dhanka kale, si lama filaan ah ayuu Mr Zomlot isugu deyay in uu adeegsado kaarkiisa masiixiyadda, iskuna xiro Beytullaxam iyo Capitol Hill. Wuxuu dadka u ololeeya Falastiin u sheegay in "nabi Ciise uu yahay hadiyad la siiyay Falastiin", si taasi uu taageero ugaga helo Masiixiyiinta Mareykanka.
Dhulka barakeysan ee Qudus ayaa ah waxa lagu muransan yahay, taas oo micneheedu yahay in hoggaamiyayaasha Carabta ay yar tahay in ay hoos uga dhacaan qaabkan waaqiciga ah, ayna ugu dambeyn la qabsadaan arrimaha muhiimka ah ee uu ku saleysan yahay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil.
UN oo Trump uga digtay arrimaha Israa'iil iyo Falastiin
Sidaa aawadeed, Falastiiniyiinta waxay qaadeen tallaabo xoogaa u muuqatay mid caqliyeysan oo ay kula shaqeynayaan Israa'iil, waxayna u baahnaayeen in Trump uu ku lug yeesho.
Marka la is hor fariisto, su'aasha ma noqoneyso in caasimadda Israa'iil ay tahay Galbeedka Qudus? Balse waxaa laga doodi doonaa in dhulka lahaysto ee Bariga Qudus ay noqoto caasimadda dal ay Falastiiniyiintu leeyihiin.
Mr Trump ayaa arrintaasi ka dhigay mid macquul ah isagoo sheegay in maamulkiisa uusan go'aan rasmi ah ka qaadan goobaha barakeysan, "sida xudduudaha ay Israa'iil u madax bannaan tahay ee Qudus, ama xallinta goobaha la isku haysto".
Taasi bedelkeeda, wuxuu sheegay in Mareykanka uu taageerayo xalka noocaas ah haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan: ma ahayn sinnaan la'aanta ay Falastiiniyiinta raadinayeen.
Ugu dambeyntii Trumo waxba uma ballan qaadin Falastiiniyiinta, hadalkiisa oo dhanna wuxuu ahaa mid uu ku taageeray, awoodna ku siiyay Israa'iil.